UZepheer 2 usimahla ixesha elincinci | Ndisuka mac
UZepheer 2 usimahla ixesha elilinganiselweyo
Namhlanje ngoMvulo, ndivela eMac ndizisa isicelo esibonelelwa simahla ixesha elilinganiselweyo. Ukuba ungomnye wabasebenzisi beMac abonwabela unyango lokufota, uZepheer 2 usenokuba sisicelo sakho esifanelekileyo.
I-Zepheer 2 yenzelwe ukuba isebenziseka lula kwaye isebenze lula. Ngaphandle kokuhlala ngaphantsi kwe-100 mB kwi-hard drive yethu, esi sicelo sincinci kodwa sinamandla siya kusivumela ukuba sihlele iifoto zethu kwaye sikunike ubungakanani bomgangatho kunye nokuntsonkotha okufunayo.
Con UZepheer 2, nokuba ifoto yathathwa ngekhamera esemgangathweni, kwiimeko zokukhanya ezingathandekiyo (ngokuchasene nokukhanya, ebusuku, njl.njl.) Enkosi kwiindlela ezininzi ezizibonayo, iya kuba sisicelo sakho sonyango esithandayo.
Uyolo lweengqondo, Kulula kakhulu ukuyisebenzisa kunye neapp oza kufumana iziphumo ezilungileyo. Eyona mpazamo iphambili, mhlawumbi, kukuba ifumaneka kuphela ngesiNgesi nakwisiRashiya. Akukho ngeSpanish.
Zama le app ukuba, okwexeshana kuphela, Isuka kwixabiso layo lokuqala le- $ 9.99 ukuya simahla ukusukela namhlanje. Ixesha elifanelekileyo lokuvavanya esi sicelo kwaye ubone ukuba ngaba iyakufezekisa na ukulindela kwakho. Ungaphoswa sesi sibonelelo.
Unokuzikhuphelela uZepheer 2 ngqo kwiVenkile ye-Mac okanye ngale linki:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Mac App Store » UZepheer 2 usimahla ixesha elilinganiselweyo
Ukholo Ro sitsho
Ayisebenzi, ubuncinci kum, ivala ngokungalindelekanga xa kuvulwa ifoto, zombini jpg kunye tiff, andazi ukuba kwenzeka into efanayo kuwe, ndineMacOS High Sierra efakiweyo
Phendula u-Fe Ro
Ukulingana kwam, enkosi ngokulungileyo ndiwubonile umyalezo wakho, ukuze kuthi, ukuba awuhambelani okanye ngama-bits angama-64 okanye nantoni na evela kwiSierra ePhakamileyo, kwaye kukho izicelo ezininzi ezingakhange zihlaziywe nabaqhubi.
Ndiyikhuphele kwaye ayisebenzi, ubuncinci kwi-sierra ephezulu iyavula kodwa xa uvula umfanekiso uvala ngaphandle kokuqhubeka, ndinike ingxelo ngaloo nto kwi-app.
UDaniel Parodi sitsho
Kuyafana nakum. Ndiyazibuza ukuba kutheni ababhali be-notra bengathathi ngxaki ukuvavanya isicelo, ukuba babe nolwazo uluvo lwabo ngamava, kunye nokuthintela ezi mpazamo zokuqala?
Phendula kuDaniel Parodi
NdineSierra (ngaphandle kokuphakama) kwaye ayisebenzi njengawe, xa ndivula ifoto iyavala.
Imagazini etyikitywe nguSteve Jobs efandeswe nge $ 50.000
U-Apple ucinga ukuba i-Apple TV inendlela ende yokuya kwilizwe lezorhwebo